नेपालसँग किन निहूँ खोज्दैछ भारत ? नेपालीहरुलाई आ’क्रोशित पार्दै फेरी पठायाे यस्तो कूटनीतिक नोट – Sanchar Patrika
July 9, 2020 287
काठमाडाैं । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको वि’रोधमा भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको पाइएको छ । यो नोटले भारत नेपालसँग निँहू खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले भारतको कूटनीतिक नोट आएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपालको दा’बीलाई अस्वीकार गर्दै भारत सरकारले असार १० गते कूटनीतिक नोट पठाएको रहेछ ।’
भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा बोलेको छैन । यद्यपि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा नेपालको दा’बीलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग परेको भन्दै नेपालले वि’रोध गरेको थियो । कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै दुई पटक वार्ताको प्रस्ताव पनि गरेको थियो, तर भारत तयार भएन । पछिल्लो पटक को’रोना म’हामारीको समयमा लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूभाग अ’तिक्र’मण गरेर बनाएको मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध गर्‍यो । र, तत्काल वार्तामा बस्न आग्रह गर्‍यो ।
तर भारत तत्काल सम्वादका लागि तयार नभएपछि नेपाल नयाँ नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसअनुसार नेपालले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।’ यता भारतीय टीभी च्यानल जी मिडियाले हालै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आ’पत्तिजनक रिपोर्ट प्रशारण गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सम्वन्धमाथि काल्पनिक कथा बुन्दै सो टीभीले अ’नर्गल प्रचार गरेको हो ।
‘ओली कि ईश्कीया’ शीर्षकमा प्रशारित रिपोर्ट १६ मिनेटभन्दा लामो छ । चिनिया राजदूत यान्छीलाई ‘विषकन्या’ को संज्ञा दिँदै टिभीले उनैको जालमा फ’सेर ओलीले भारतविरोधी कदम चालिरहेको दा’बी गरेको छ ।
आ’पत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘केपी ओली ने अपने दिलके हसरतोंको उडान देनेका लिए यान्की से नजदिकीया बढाइ, लेकिन वा हनि ट्र्याप मे फसगए ।’ यान्कीकै आग्रहमा फसेर ओलीले भारतका तीन क्षेत्रहरुमाथि दा’वी गर्दै आफ्नो नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेको दा’वीसमेत गरिएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न ओली र यान्कीको फोटो जोडेर केही काल्पनिक संवादहरु पनि सुनाइएको छ ।
भारतीय टीभीको अ’फवाह यतिमा मात्रै सीमित छैन । उसले ओलीको ‘निजी एमएमएस’ चीनको हातमा रहेको र त्यसैलाई लिएर ओलीसँग चीनले ब्ल्याकमेलिङ गरिरेहको भन्नसमेत भ्याएको छ । यसको जानकारी नेपालका केही संसदलाई रहेको भन्दै उनीहरुले लोकलाजका कारण मुख खोल्न नसकेको दा’वी गरिएको छ ।
जीटीभीमा प्रशारित यो रिपोर्ट भारतीय पत्रकारिताको नांगो रुप हो । यो रिपोर्टलाई ‘पितपत्रकारिता’ वा ‘प्रपोगाण्डा’ भनेर दु’त्कारेर मात्रै पुग्दैन । यो पत्रकारिताको खोल ओडेर गरिएको संगीन अपराध हो । सत्यतासँग एक प्रतिशत पनि सम्वन्ध नरहेको विषयलाई १६ मिनेटको रिपोर्ट बनाएर प्रशारण गर्ने भारतीय टिभी च्यानललाई के गर्ने ? हामी त इन्डियन च्यानलले जे पनि भन्छन् भनेर मुन्टो बटारौंला, तर यसले भारत र अन्य देशका मानिसहरुलाई पक्कै प्र’भाव पार्छ ।
कुनै अमुक देशका प्रधानमन्त्री र महिला राजदूतबीच काल्पनिक कथा रचेर प्रायोजित रिपोर्ट बनाउनु जी टीभीको अक्षम्य अ’पराध हो । यसमाथि नेपालको सरकारले एक्सन लिनैपर्छ । केही समयअगाडि नेपालमा एक अखबारले माओत्सेतुङको तस्वीरमा मास्क लगाइदिएको सामान्य घ’टनामा काठमाडौंस्थिति चिनीया दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आ’पत्ति जनाएको थियो । जीटीभीको हर्कत त्योभन्दा सयौं गुणा आ’पत्तिजनक छ ।
तर, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास भने भारतीय मिडियाले एकपछि अर्को कपोलकल्पित र भ्रा’मक समाचारहरु प्रकाशन/प्रशारण गरिरहँदा पनि मस्त निद्रामा छ । टाइम्स अफ इन्डियाजस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाले समेत नेपालका प्रधानमन्त्रीको तस्वीर दु’रुपयोग गर्यो । त्यसमा आ’पत्ति जनाएर दूतावासले एउटा पत्रसमेत पठाउन सकेन ।
जिटीभीको रिपोर्टमा पनि उसले अहिवलेसम्म चासो दिएको छैन । विषयको संवेदनशीलताका कारण अब नेपाल सरकारले नै जीटिभीमाथि एक्सन लिनुपर्ने समय आएको छ । टीभीलाई उक्त रिपोर्ट तत्काल ह’टाएर माफी माग्न लगाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा, नेपालको दु’ष्प्रचार गर्ने भारतीय मिडिया नेपालमा स्वच्छन्द तरिकाले चलिरहेका छन् । नेपालीले पैसा तिरितिरी भारतीय मिडियाका ‘फेक न्यूज’ हेरिरहेका छन् । यस्तै अवस्था हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ, यी भारतीय न्यूज मिडियालाई नेपालमा सदाका लागि किन रोक नलगाउने ?
Prevखतरा बढेपछि उपत्यकाको यो ठाउँमा फेरि लकडाउन, पसल व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन (बिज्ञप्तिसहित)
Nextभोलिबाटै सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने, यी हुन पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु